चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओको बाँडफाँट मिति तय - Aarthiknews
शनिबार, २२ फागुन २०७७ Saturday, 06 March, 2021
चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओको बाँडफाँट मिति तय
बुधबार, ०७ माघ २०७७
काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आईपीओको शुक्रबार बाँडफाँट हुने भएको छ । विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणी ढकालले शुक्रवारका लागि बाँडफाँट निश्चित भएको जानकारी दिएका हुन् ।
बुधवार साझ प्रि अलोटमेण्ट सम्पन्न भएकाले शुक्रवार बाँडफाँट गर्न लागिएको ढकालको भनाई छ । समय भने निर्धारण हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
यस कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा १७ दशमलव ५७ गुणा बढी आवेदन परेको छ । १२ लाख ५१ हजार ९३८ जना आवेदकले २ करोड ४४ लाख २९ हजार ८४० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका हुन । कम्पनीले पुस २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म सर्वसाधारणमा १३ लाख ९६ हजार २२ कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री गरेको हो ।
सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको कुल १५ लाख ३४ हजार ९१ कित्ता आइपीओमध्य ६१ हजार ३६४ कित्ता कर्मचारीको लागि र ७६ हजार ७०५ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरेको छ । यस कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा १७ गुणा बढी आवेदन परेकाले गोलाप्रथाद्वारा वितरण हुनेछ ।
योग्य आवेदकमध्य १ लाख ३९ हजार ६०२ जनाले १० कित्ताका दरले शेयर पाउनेछन् । बाँकी दुई कित्ता थप दुई जनाले एक एक कित्ताका दरले पाउनेछन् । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि आईपीओ बाँडफाँट गरी दोस्रो चरणमा अन्य सर्वसाधारणका लागि विक्री गरेको हो । सर्वसाधारणलाई आईपीओ बाँडफाँट गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ९१ हजार पुग्नेछ ।
बन्ला त ई–केवाईसी ‘बोरे प्रवृति’ को अचुक अस्त्र !
महालक्ष्मी विकास बैंकले लाभांश दिने प्रस्ताव गर्यो
पहिलो दिन १ लाख ३८ हजारले भरे ज्योति लाईफको आईपीओ
नेप्सेमा एक करोड ८२ लाख कित्ता शेयर थपियो
सिर्जन फाइनान्सले चैत १४ गते बोलायो साधारण सभा
महालक्ष्मी विकास बैंकले डाक्यो साधारण सभा
बैतडीमा खोप लगाउन ४८ खोप केन्द्र तोकिए
जिल्लामा दोस्रो चरणको खोप ७३ स्थानबाट
त्रिवीका परिक्षा अब सीसी क्यामेराको निगरानीमा
मेलम्चीको पानी नयाँ र पुरानो दुबै पाइपबाट आउने
विश्वविद्यालयमा पहिलो पटक उद्यमशीलता विकासको पढाइ
महाशिवरात्रिको तयारी तिव्र, धेरै रकम तिर्नेलाई विषेश सुविधा
करिब ३० वटा पराना रोग निको पार्ने प्राकृतिक विधि पञ्चकर्म
५२ थान चोरीका मोबाइल सहित ४ जना पक्राउ
छ्या....छ्या ! केयुकेएलले वितरण गरेको पानीमा ढल
हाउजेको सातौं शोरुम काठमाडौंको चाबहिलमा
मेलम्चीको पानी शनिबार काठमाडौं उपत्यकामा झर्दैछ
मौलिकता देखिने सबै उत्पादन नेपाली होइनन् : राष्ट्रपति
डा खतिवडालाई पाटनबाट चोरिएको ऐतिहासिक वासुदेव–कमलाजा मूर्ति हस्तान्तरण
वैशाख ७ गतेदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने
'सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाइने जति बेनेफिट अब अरु कसैले पनि दिन सक्दैन'